Doorashada Finland | Somaliska
Shalay waxaa Finland ka dhacday doorasho taasoo isbedel weyn ku keentay siyaasada wadankaas. Xisbi ka soo horjeeda soo galootiga oo lagu magacaabo True Finns ayaa noqday kan 3-aad ee ugu weyn Finland. Xisbigaan ayaa doorashadii hore ka helay 5 kursi oo keliya halka doorashadii shalay ay heleen 39.
Xisbigaan True Finns ayaa ka soo horjeeda soo galootiga, midowga Yurub iyo luuqada Swedishka ee tan labaad ka ah wadanka Finland. Dadka Finland ayaa noqonaya kuwii ugu dambeeyay ee codkooda ku taageera xisbi cunsuri ah iyadoo sanadkii la soo dhaafay ay baarlamaanka Sweden soo galeen xisbiga cunsuriga ah ee Sverige Demokraterna markii ugu horeysay.
Waxaa muuqata in wadamada Yurub ay ku faafayaan xisbiga ka soo horjeeda soo galootiga oo siyaasadooda ku saleysantahay cunsuriyada. Denmark ayaa u muuqata in guud ahaan dowlada ay ku salaystanahay cunsuriyad, halka Holland ay dowlada ka tirsanyihiin xisbiga ninka Islaamka aflagaadeeya ee Geert Wilders.
France ayaa beryahaan waxaa ka taagneyd dood kulul iyadoo la sheegay Sarkozy in uu Muslimiinta toosh ku daarayo si uu ugu guuleysto doorashada. France ayaa laga mamnuucay niqaabta isbuucii la soo dhaafay.
Wareysi Safaarada Sweden ee Addis Ababa
April 18, 2011 at 14:57
Asc jimcale walaal waxan kuweydina xisbigan wax saameyn maku yeelan kara arimaha sogalotiga ee sweden iska dhiba ama dadka ax qarabadoda kenan.midkale siyasad ahaan sweden iyo finland cunsuriyinta keeba ay ku badan yìhin . Wad mahadsan asc
wsc, sxb ma filayo in ay wax saameyn ah ku yeelanayaan arimaha Sweden balse waxay niyada u dhisayaan xisbiga cunsuriga ah ee hada ku jira baarlamaanka Sweden, xisbigaan xitaa wax saameyn ah kuma leh siyaasada soo galootiga Sweden balse waxay fureen dood ku saabsan arimahaan.
dhinaca cunsuriyada runtii faahfaahin dheeraad ah kama haayo Finland balse sida aan dhagadhageeyay sidaas kagama dugna Sweden oo labada wadan waa kuwo daris ah. Si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa in xisbiyadaan cunsuriga ah ay taageeradooda sii kobci doonto sanadaha soo socda maadaama ay isticmaalayaan ololaha ku dhisan cabsi aan jirin.
ASC WR WB al xamdulillaah alle ayaa mahad iska leh alle ayaana wax walbo og runti dhibaatada wadankeena ku dhacday wa waxa anaga kasbanay bal fiiriya heerka aan marayno inaan ka fakirno xisbi na neceb ba soo baxay maxaan uga fakari waynay diinteenii? maxan uga fakari waynay wadankene? maxan uga fakari waynay dadkeeni? intaba maantadaan lajoogo wa noo bahayihiin diiti nusrayn ay nooga bahantahay dalkeena wax u qabad uu nooga bahayahay dadkeeni caawimaad inte karaamkeena ah ayay nooga bahayihiin alloow wax nagaradsii oo fikirkeena fogee inaan kafakarno side ugu noolaano wadan aan wadankeena ahayn wadan muslim ahayn waa wax aan caqliga saliimka ah haduu shaqeyo qaada karin halagu fakaro 3 da aan soo sheegay waliba jawi dagan waxyaabahan kale wax wax noo tari doono maha ila inay wax naga sii haleeyan mahane oo qaxootigena soo bato dadkeenii sii duloobo diinteenii aan ka tagno waana arin qatarteeda leh allaahuma najjinaa aamiin!!!